Faah Faahin: Nabadoon Geedi Firdhiye Oo Lagu Dilay Degmada Dharkeynleey Ee Magaalada Muqdisho.
Saturday August 05, 2017 - 10:35:50 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil ka dhacay fiidkii ka dhacay degmada Dharkeynleey ee galbeedka magaalada Muqdisho.
Xoogag hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa toogasho ku dilay mid kamida odayaasha caanka ah Muqdisho kaasi oo qeyb ka ahaa fadhiyadii xildhibaanada Baarlamaanka lagusoo xulay ee ka dhacay magaalada Jowhar.
Sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah Rag bastoolado ku hubeysan ayaa khaarijiyay Nabadoon Geedi Firdhiye oo wax kasoo xulay xildhibanada Baarlamaanka DF-ka ee lagasoo doortay dhanka maamulka isku magacaabay 'HirShabelle'.
Raggii dilka geystay ayaa si nabad gelya ah goobta uga dhaqaaqay mana jirin ciidamo katirsan DF-ka oo dabagal ku sameeyay xoogaga dilka geystay.
Nabadoon Geedi Firdhiye ayaa cilaaqaad wanaagsan lalahaa dowladda Federaalka iyo ciidamada shisheeyaha AMISOM.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay xaqiijinayaan in Firdhiye uu isku diyaarinayay qabashada xilka guddoomiyaha deegaanka Garasbaaley duleedka Muqdisho marka dowladda Federaalka ay si rasmi ah ugu aqoonsato degmo katirsan gobolka Banaadir.
Geedi Firdhiye ayaa dadaal dheeri ah ugu jiray sidii mar uun Garasbaaley loogu aqoonsan lahaa degmo isagoo dhowr mar deegaanka ku casuumay xildhibaanno iyo siyaasiyiin katirsan Dowladda Federaalka wuxuuna waday olole ballaaran oo maamulka Gobolka uga dhaadhicinayo in Garasbaaley degmo loo aqoonsado.
Ma ahan markii ugu horraysay oo Mid kamida odayaashii soo xulay qaar katirsan xildhibaanada Baarlamaanka DF-ka lagu dilo magaalada Muqdisho, odayaasha ladilay xisaab malahan waxaana dhammaan dilalka odayaashan mas'uuliyadooda sheegatay Al Shabaab oo horay uga digtay in ay ku dagmaan soo xulista xildhibaanada Baarlamaanka.